Jin ဟာ BTS အဖွဲ့ထဲမှာသာ အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေပေမဲ့ မိသားစုထဲမှာတော့ အငယ်ဆုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ထဲမှာ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး မန်ဘာတွေရဲ့စိတ်ကိုလည်း တက်ကြွအောင်လုပ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင် သူစိမ်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပုံစံကို အမြဲ‌မြင်နေရတဲ့အတွက် Jin မှာ စိတ်ဒဏ်ရာမရှိဘူးလို့ ထင်မိကြပါလိမ့်မယ်။
တကယ်ကတော့ Jin ဟာ ငယ်ငယ်လေး‌တုန်းက သူ့ရဲ့အစ်ကိုကြီးဖြစ်သူနဲ့ ယှဉ်မိပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်ဖူးတဲ့အပြင် အမေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်အပျက်လေးတွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ အငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ Jin ဟာ သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကို ပြောပြဖူးပါတယ်။ “ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတုန်းက အစ်ကိုကြီးနဲ့ တော်တော်မတူဘဲ ကွဲထွက်နေတာပါ။ အစ်ကိုကြီးကကျ သူ့အတန်းရဲ့ စံပြကျောင်းသားဖြစ်သလို အတန်းခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တော့ အမေက သူ့သားကြီးကို ပိုပြီး အားရတယ်” လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးဘဲ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာ Jin က အမေ့အကြောင်းကိုပြောရင်း ငိုချခဲ့ဖူးပါတယ်။ “ငယ်ငယ်တုန်းကလေ ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ အမေခမျာ တခါမှ ကြွားခွင့်မရခဲ့ရှာဘူး။ အမေ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေက သူတို့သားတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ထူးချွန်ကြောင်းတွေကိုပြောတိုင်း သူ့ခမျာ ဒီတိုင်းလေး ထိုင်ပြီး နားထောင်နေခဲ့ရရှာတာ။ အဲ့အချိန်ကစပြီး အမေဂုဏ်ယူရတဲ့ သားတစ်ယောက်ဖြစ်မှကို ရမယ်ဆိုပြီး အသိဝင်သွားခဲ့ပါတယ်” လို့ပါ ရင်ဖွင့်ဖူးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း Jin ဟာ သူရောက်ရှိရာနေရာတိုင်းမှာ ထိပ်ဆုံးကနေရအောင် အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုတော်ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားတုန်းကလည်း “ကျွန်တော် လူရွေးပွဲကို လာပြိုင်တုန်းက ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းလဲမသိခဲ့ဘူး။ ဘယ်လို သီချင်းဆိုရမလဲ? ဘယ်လို ကရမလဲ? ဆိုတာလည်း မသိဘူး။ ပြောရရင် သံစဉ်တွေအကြောင်းတောင် သေချာနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ မပျက်မကွက်နေ့တိုင်း ကြိုးစားလေ့ကျင့်တယ်။ အဖွဲ့ဝင်ညီလေးတွေ အိပ်နေတုန်းမှာလည်း လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်” ဆိုပြီး အတိတ်ကအကြောင်းလေးတွေကို ပြန်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
Jin ရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေက တကယ်လည်း အရာထင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ BTS အဖွဲ့အနေနဲ့ကော တကိုယ်တော်အနေနဲ့ပါ အအောင်မြင်ဆုံးကြယ်ပွင့်တစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။ “အမေ ဂုဏ်ယူရတဲ့သားတစ်‌ယောက်ဖြစ်စေရမယ်” ဆိုတဲ့ သံဓိဌာန်အတိုင်း အားလုံးကအသိအမှတ်ပြုပြီး မချီးကျူးလို့ မရတော့တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။
Previous post Tzuyu နဲ့ Mina တို့ စကားအများကြီးပြောတာကို မြင်ရလေ့မရှိခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်ကအဖြစ်မှန်
Next post ဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်မှုတွေကြောင့် ဘဝတဆစ်ချိုးပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသား (၅) ဦး